Ungayisebenzisa kanjani iGoogle Allo njengochwepheshe wangempela | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | AmaSelula, I-Telephony
I-Google Allo uhlelo lokusebenza olusha lwe-Google lokuthumela imiyalezo, ofuna ukungena ngalo ngokugcwele kulo mhlaba. Ngokungafani nama-Hangouts, I-Allo yakhelwe ukuthi isetshenziswe kudivayisi eyodwa (isebenza ngenombolo yocingo), njenge-WhatsApp, ukuze singakwazi ukuyifaka kukhompyutha noma kuthebulethi yethu. Asazi ukuthi i-Google izowushintsha umqondo wayo ngokuhamba kwesikhathi noma ukuthi izolandela izinyathelo ze-WhatsApp ngokunikeza inguqulo yewebhu esivumela ukuthi sikwazi ukufinyelela kuhlelo kalula. I-Allo isivumela ukuba sibe nezingxoxo ezicebile nabangane bethu noma imindeni yethu sicela imininingwane ngesikhathi sangempela ngaphandle kokuthi sishiye uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo futhi kufanele sisebenzise izinhlelo ezifana neGoogle Maps noma isiphequluli esisisebenzisa njalo.
1 Yini engingayenza iGoogle Allo?
2 Yini engingakwazi ukuyenza ngeGoogle Allo?
3 Uyini umsizi weGoogle?
4 Yini engingayisebenzisela umsizi weGoogle?
5 Kodwa i-Google Allo ayifani yini ne-Hangouts?
6 Umbono wethu
Yini engingayenza iGoogle Allo?
U-Allo usinikeza izindlela ezimbili zokuxhumana. Eyokuqala ingxoxo lapho singacela khona imininingwane evela kumasevisi akwa-Google ngqo, ngokusebenza okufana kakhulu ne-Google Now nalapho singabuza khona imiphumela yomdlalo webhola, isimo sezulu, sithole indawo yokudlela noma lapho singathola khona ikhofi, isimo sendiza yethu, lapho kuzalwa u-Obama nokunye okuningi.
Kepha i-Allo futhi isinika indlela yesibili: ngezingxoxo nabangane bethu nalabo esibajwayele. Uma siba nengxoxo yokuthi singaya kuphi esidlweni sakusihlwa singasebenzisa umyalo "@google" olandelwa "yizindawo zokudlela zokudla zamaShayina" ukuze indawo yokudlela yamaShayina lapho singaya khona sidla isidlo sakusihlwa. Ngokuchofoza kokukhethiwe, ifayela lale ndawo yokudlela lizokhonjiswa ngolwazi oluthe xaxa ngayo njengamahora, ngaphansi, amanani, isicelo sokubhukelwa kwetafula ...
Kepha hhayi kuphela lapho sizokwazi ukucinga imininingwane ngale bot, kepha futhi singakwazi sesha amavidiyo ngomyalo ofanayo. Umsizi weGoogle usinikeza izimpendulo ezahlukahlukene esingachofoza kuzo ukuthola eminye imininingwane ephathelene nokusesha esikwenzile. Ngokuya ngetemu lokusesha, umsizi weGoogle uzosinika imiphumela yombhalo noma yevidiyo, uma ngabe itholakala kungxenyekazi ye-YouTube.
Okunye okusha okubalulekile okusilethela u-Algo yilezi uphendula ngokushesha, umsebenzi obonga amaseva wobuhlakani bokuzenzela we-Google, ozosinikeza izimpendulo ngokuya ngephethini yethu. Uma sijwayele ukusebenzisa i- "hahaha" ne- "LOL" ukwenza isibonelo, i-Allo izosinika lolu hlobo lwezimpendulo ngokuya ngomuntu esivame ukuzisebenzisa. Akufani ukukhuluma ngokuhlangana nomphathi wethu kunokukhuluma nabangane noma nomndeni wethu.
I-Google Allo ayisivumeli nje kuphela ukuthi sihlanganyele ezingxoxweni ngengxoxo, kodwa futhi isivumela ukuthi sithumele izithonjana, indawo yethu kanye nezitika noma izitika ezidumile. Ngokuzenzakalelayo, kufakwe amaphakheji esitikha amathathu, kepha singafinyelela esitolo lapho singathola khona inani elikhulu labo lamatimu ahlukene. Okwamanje ayikho inketho yokuthumela amafayela we-GIF, kepha konke kuzofika, impela.
Yini engingakwazi ukuyenza ngeGoogle Allo?
I-Google Allo uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo kuphela, ngalo asikwazi ukwenza amakholi evidiyo. Ukuze senze lokhu kufanele sisebenzise uhlelo lwe-Duo, uhlelo lokusebenza olwafika emakethe isikhathi esingaphezu kwenyanga edlule futhi okwamanje alunikeli ithuba lokwenza izingcingo zeqembu.
Futhi asikwazi ukwenza amakholi wezwi, kepha uma singathumela imilayezo yezwi efana ne-WhatsApp, Telegram, Line ...
Okwamanje Uqonda amagama ambalwa kakhulu weSpanishi, kodwa iyazivikela. Uma umbuza umbuzo onzima, uzokutshela ukuthi usafunda lolu limi.
Ukusetshenziswa kwayo kuhlotshaniswa nenombolo yocingo ngakho-ke akuyona i-cross-platform, isici esingahle sibe inkinga yokwanda kwayo phakathi kwabasebenzisi.
Uyini umsizi weGoogle?
Umsizi weGoogle njengoba igama lakhe likhombisa, ungumsizi ophiwe ubuhlakani bokufakelwa ocabanga ngathi. Njengoba sisebenzisana nalo msizi, kulapho efunda khona kakhulu ngezinto esizithandayo nalokho esikuthandayo ukuze asinikeze izimpendulo ezanele ezidingweni zethu zosesho nolwazi.
Umsizi weGoogle uhlanganiswe ne-Allo ukwenza lula ukuxhumana nabangane bethu nomndeni, umsizi lokho ayifuni ukuthatha indawo ye-Google Now.
Futhi umsizi onobuhlakani bokuzenzela obuvela kuGoogle ihlanganiswe nazo zonke izinsizakalo ezinikezwa yinkampani, Ngaphezu kwakho konke ngeGoogle Maps lapho uthola khona yonke imininingwane lapho ufuna izindawo zokudlela ongazidla, izitolo noma ukuthi singahamba kanjani ukusuka kwelinye iphuzu ukuya kwelinye, sinikeza ithuba lokwethula i-Google Maps lapho isikhombise indlela efanelekile yokwenza uhambo .
Yini engingayisebenzisela umsizi weGoogle?
Umsebenzi oyinhloko uMsizi weGoogle asinikeza wona ku-Allo yiwona iziphakamiso zempendulo esheshayo, ngaphezu kokunikeza iziphakamiso ezintsha kusesho esikwenzayo ngokusebenzisa iwizadi.
Singabona imibuzo ejwayelekile ye-Google Now kube sengathi lizokuna kusasa noma ukuthi izulu lizoba njani ngesonto elizayo.
Uyakwazi humusha imibhalo.
Qaphela izibalo zezibalo
Qaphela ukuseshwa kwesithombe noma kwevidiyo amakati, abantu, amadolobha nezinto.
Uma usinikeza umphumela wombuzo, ungaqhubeka ubuze ngalowo mbuzo. Isibonelo: uma sikubuza ukuthi ukuphi umbhoshongo wasePisa, lapho usiphendula e-Italy, singakubuza ukuthi ulinganisa nini.
Vula izinhlelo zokusebenza efakwe kwi-smartphone yethu.
Thola amakheli ezikhungo nokuthi yini usiqondise kubo.
Kodwa i-Google Allo ayifani yini ne-Hangouts?
Ngenkathi i-Google yethula lolu hlelo lokusebenza olusha ku-Google I / O, abasebenzisi abaningi bazibuza ukuthi ngabe lolu hlelo lokusebenza luyindawo yemvelo yama-Hangouts. NgokweGoogle impendulo ithi cha. Njengoba ngichazile ngenhla, iGoogle Allo ayisiyipulatifomu njengoba ihlotshaniswa nenombolo yocingo ngenkathi i-Hangouts ihlotshaniswa ne-akhawunti ye-imeyili ye-Gmail.
I-Allo nayo iyasivumela qokomisa ukubaluleka komyalezo ukwandisa usayizi wohlamvu noma i-emoji ngokungeziwe ekusivumeleni ukuthi sithumele imilayezo yezwi, njengezinhlelo zokusebenza eziningi zemilayezo, okuthile okungatholakali ngama-Hangouts.
I-Allo ihlanganisa umsizi wezobunhloli bokufakelwa Umsizi weGoogle ungumphelelisi ezingxoxweni zethu.
Singabona izingxoxo ze-incognito futhi usungule isikhathi lapho imilayezo, amavidiyo, izithombe noma lokho esikuthumelayo kuzotholakalela ukubonisana kwakho.
Kusivumela ukuthi sisebenzise izinhlelo zokusebenza, ezihambisana noMsizi weGoogle njengokubhuka kwehhotela, ukucela imoto kwa-Uber ...
Futhi jabulela imidlalo ngokusebenzisa ingxoxo.
Uma ungabasebenzisi be-iPhone, ngemuva kokufika kwe-iOS 10, i-Apple igcizelele ngokukhethekile ukungeza imisebenzi emisha kuhlelo lokusebenza lwemiyalezo, eziningi zazo cishe ziyefana esingazithola ku-Allo okufana nethuba lokuthumela nokungeza izitika ngesitolo esenzelwe lolu hlelo ngokukhethekile, ukugqamisa umbhalo esiwuthumelayo, ubukhulu be-emojis bukhulu, kwenza ngezifiso izithombe esizithumela ngombhalo noma ama-doodle. Futhi, ngenxa yekhibhodi ye-Google ye-iOS, engakatholakali ku-Android, abasebenzisi be-iPhone bangasebenzisa uhlobo lomsizi weGoogle, kepha ngaphandle kwezinketho zokuxhumana i-Allo esinikeza zona.
Umsizi weGoogle usebenza njengokungathi kwakuyibhodi yendabuko yalolu hlobo lohlelo lokusebenza kepha ngokungafani nalokhu, Umsizi weGoogle ufunda ngathi ngaso sonke isikhathi lapho sisebenzisana nayo. Iphinde isinikeze imininingwane ngendlela ebonakalayo necacile, ekhombisa ngokuzenzakalela izinketho ezintsha ngokusho kosesho lwethu. Okuthile esingakuphuthelwa yi-Allo ukuthi ayisiphenduli ngemiyalo yezwi, into eyenziwa yiGoogle Now, yize icabangela ukuthi uhlelo lokusebenza lwemiyalezo inengqondo ethile.
Umsizi we-Google izoqala ukukhuluma lapho abafana abavela eMountain View bethula iKhaya leGoogle, idivaysi abafuna ukubhekana nayo nomsizi we-Amazon, esingaqala ngayo ingxoxo, silondoloze amabanga, singamceli nje kuphela ukuthi asikhumbuze ama-aphoyintimenti wekhalenda, ukukhomba ukuthi asinalo ubisi noma kufanele sithenge isibani isibani segumbi lokudlela. Futhi mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi umsizi weGoogle uzogcina ngokudla i-Google Now kuzinguqulo ezizayo ze-Android.
I-Allo ibethela kuphela imilayezo esiyithumela ngemodi ye-incognito, imilayezo esingasetha kuyo usuku lokuphelelwa isikhathi futhi akekho ongayifinyelela. Kodwa-ke, imilayezo esiyithumela njalo ngaphandle kwemodi ye-incognito ngeke ivikelwe ngale ndlela, ngoba uma kungenjalo umsizi weGoogle ubengeke enze mqondo kulolu hlelo lokusebenza. Lesi sici singaba nomthelela omncane empumelelweni noma ekuhlulekeni kwalolu hlelo, ngoba isikhathi esithile manje, abasebenzisi abaningi, besabela ukuphepha kwabo, basebenzisa kuphela izinhlelo zokusebenza ezibethela konke okuqukethwe kusukela ngesikhathi esishiya ngaso. ukuphela. Iningi lezicelo zemiyalezo linikeza lokhu kubethela kokuphela kokuphela, noma kungebona bonke futhi iGoogle ibonakala ifuna ukudlala eqenjini elithi "hhayi bonke" ukubamba abasebenzisi abakhathazekile ngokuphepha kwabo.
Asazi ukuthi kungani I-Google inqume ukuhlukanisa i-Duo ne-Allo Esikhundleni sokuzihlanganisa nabo kuhlelo lokusebenza olulodwa olungasiphoqi ukuthi sifake izinhlelo ezimbili zokwenza imisebenzi emibili esingayenza ngokuphelele ngomunye nje, njenge-Facebook Messenger, i-Hangouts noma i-Skype. Okwamanje lolu hlelo selwethulwe e-United States futhi kancane kancane luyakhula emhlabeni wonke, ngakho-ke kungathatha isikhashana ukufinyelela ezweni lethu. Uma ungabasebenzisi be-Android ungalanda ngqo kusuka kusixhumanisi esilandelayo. Ngakolunye uhlangothi uma ningabasebenzisi be-iOSOkuwukuphela kwento etholakalayo njengamanje ukuthi wenza i-akhawunti ku-App Store yaseMelika futhi ngaleyo ndlela ukwazi ukuyilanda ngaphambi kokuthi ifike ezweni lethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungayisebenzisa kanjani iGoogle Allo njengochwepheshe wangempela
671 39 68 78 kusho
Ngine-Samsung s7ege 1 nengxenye edlule futhi kwenzeka kimi ukuthi iphahlazeka kakhulu uma bengithumelela ividiyo kufanele ngilinde imizuzu engama-20 ukuyilanda futhi into ekhathaza kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi isikrini siyasangana nefoni yami ngingu-671 39 68 78 negama lami uHumberto
Phendula ku-671 39 68 78